War deg deg ah:Obama "Lama baahin doono sawirada dhimashada Osama Bin Ladin" – SBC
War deg deg ah:Obama "Lama baahin doono sawirada dhimashada Osama Bin Ladin"
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhaweyd shaaca ka qaaday in go’aan ku gaarey in aan la baahin sawirka hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida Osama Bin Ladin oo maalinimadii Isniinta waaberigii ciidamada Mareykanka ee Navy Seals ay ku dileen magaalada Abbotabad ee waqooyiga Pakistaan.
Wareysi Madaxweyne Obama uu siiyey Telefishinak CBS ee laga leeyahay Mareykanka ayaa sheegay in sawirka laga qaaday Osama markii la diley uu yahay mid qaracsan ah oo aan la baahin karin isagoo xusey in sawirkaasi aan bulshada loo baahin karin.
Wareysiga Obama uu siiyey Barnaamijka 60 Minutes oo uu ku wareystey wariye Steve Kroft ayaa lagu wadaa in caawa la baahiyo qaybo ka mid ah wareysigaasi.
Sawirada Osama ayaa warar laga helay gaashandhiga Mareykanka waxay sheegayaan in wajiga xabado kaga yaalaan isla markaana isha bixid iyo daanka goonka bidix ee madaxa uu ku yaal dhaawac weyn oo hool ah taasi oo la sheegay in sawirka uu ka muuqdo qaracan xoogan. Senator Kelly Ayotte oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga ah Mareykanka ayaa sheegtey in ayaa sheegtey in indhaha saartey sawirada Osama Bin Ladin ee la qaaday xiligii la diley, iyadoo sawiradaasi sheegtey in la qaaday markii meydkiisa la geeyey saldhig ciidamada Mareykanku ku leeyihiin wadanka Afagaansitaan.
Dhinaca kale xeer ilaaliyaha guud ee Eric Holder ayaa u sheegay gudiga garsoorka Senete-ka Mareykanka oo su’aalo ka waydiiyey sharcinimada dilka Osama Bin Ladin iyadoo waliba ay soo baxayso eedeymaha ama dhaliilaha Mareykanka loo jeedinayo ee ku aadan in la dilay Osama isaga oo aan hubeysneyn.
Eric Holder wuuxu sheegay in ay aheyd talaabo sax dilka Osama Bin Ladin isagoo sheegay in taasi ay ku jirtey danta iyo amaanka dalka iyo dalka Mareykanka.